Fahasamihafana eo amin'ny E Coli sy Serratia Marcescens | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny E Coli sy Serratia Marcescens | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / bakteriolojia / fahasamihafana eo amin'ny E Coli sy Serratia Marcescens
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny E coli sy Serratia marcescens dia ny E. coli dia bakteria coliform izay an'ny genes Escherichia ary ampahany amin'ny flora tsinay ara-dalàna raha Serratia marcescens kosa bakteria miendrika grama-ratsy manana fahaizana mamokatra mena loko loko amin'ny hafanan'ny efitrano.
E.coli sy S. marcescens dia karazan-bakteria miendrika gram-negatif, izay an'ny fianakaviana Enterobacteriaceae. Na izany aza, an'i E. coli dia ao amin'ny karazana Escherichia, ary i S. marcescens dia ao amin'ny karazana Serratia . Samy E. coli sy S. marcescens dia pathogen manararaotra izay miteraka aretina amin'ny olombelona. Tsy toy ny E. coli , ny S. marcescens dia tsy singa iraisan'ny flora-n'ny olombelona.
2. Inona izany E. Coli
3. Inona ny Serratia Marcescens
4. Ny fitoviana eo amin'i E Coli sy Serratia Marcescens
5. Fampitahana mifanila - E Coli vs Serratia Marcescens amin'ny endrika Tabular
Inona ny E. coli?
E. coli dia bakteria anaerobika miiba ratsy, miendrika tsorakazo, fakultative izay an'ny fianakaviana Enterobacteriaceae . Izy io dia bakteria coliform faecal izay matetika hita ao amin'ny tsinay ambany amin'ny zavamiaina misy rà mafana . Maro amin'ireo karazana E. coli no tsy manimba, ary izy ireo dia ampahany amin'ny microbiota tsinay mahazatra izay mitazona ny tsinay ho salama. Saingy, misy serotypes sasany miteraka fanapoizinana ara-tsakafo, kibo mafy, fivalan-dra, tsy fahombiazan'ny voa ary mandoa. Indrindra, ny fatra E. coli O157: H7 dia mamoaka poizina mahery antsoina hoe Shiga, izay tompon'andraikitra amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo mahery. E. coli dia miditra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny zotra faecal-oral. Ny rano, legioma manta, ronono tsy voadio ary hena tsy mbola masaka, dia loharanom-pahalalana marobe E. coli . Noho izany, ny aretina E. coli dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fanomanana sakafo sy ny fahadiovana tsara.
Sary 01: E. coli
E. coli dia iray amin'ireo zavamiaina maodely prokaryotic fototra ampiasaina amin'ny sehatry ny bioteknolojia sy ny microbiology. Noho izany, E. coli dia zavamananaina amin'ny andrana ADN recombinant maro. Ny antony ao ambadiky ny fampiasana E. coli ho toy ny zavamananaina maodely voalohany dia toetra mampiavaka ny E. coli , ao anatin'izany ny fitomboana haingana, ny fisian'ny haino aman-jery kolontsaina mora maniry, ny fahamoran'ny fanodikodinana ary ny fahalalana betsaka momba ny généetika sy ny génomika.
Inona ny Serratia Marcescens?
Serratia marcescens dia karazan-tsakafo bakteria anaerobika miendrika anja-barika miendrika gram ao amin'ny fianakaviana Enterobacteriaceae. Avy amin'ny karazana Serratia isan-karazany, S. marcescens no karazam-borona mitokana indrindra amin'ny aretin'ny olombelona. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny S. marcescens no mitoka-monina mahazatra indrindra ary ny pathogen mahery indrindra amin'ny olombelona. Na izany aza, matetika izy io dia miasa ho toy ny pathogen mpanararaotra. Mahatonga aretim-borona ao amin'ny olombelona izany. Ity bakteria ity dia miteraka aretin-tsaina sy tsimok'aretina maso matetika. Ankoatr'izay, izy dia tompon'andraikitra amin'ny endocarditis, osteomyelitis, septicemia, ratra ary ny lalan-drà amin'ny lalan-dra. S. marcescens dia mahatohitra antibiotika maro.
Sary 02: S. marcescens
Iray amin'ireo mampiavaka azy manokana ny fahaizany mamokatra loko mena amin'ny hafanan'ny efitrano. Amin'ny tany sy rano no tena ahitana ny S. marcescens . Raha ny marina, S. marcescens dia miely amin'ny tontolo iainana. Saingy tsy singa iraisan'ny flora faecal olombelona.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'i E Coli sy i Serratia Marcescens?
E.coli sy S. marcescens dia bakteria miendrika gram-ratsy.
Samy zavamananaina anaerobika mahay izy roa ireo.
Izy ireo dia an'ny fianakaviana bakteria Enterobacteriaceae.
Izy ireo dia otrikaretina manararaotra.
Samy mamokatra anzima antsoina hoe transcarbamoylases aspartate.
mihetsika ny marcescens raha mihetsika kosa ny karazana E. coli .
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i E Coli sy i Serratia Marcescens?
E.coli dia bakteria miendrika gram-negatif izay mivelona ao amin'ny tsinay ny olona sy ny biby salama, ary i S. marcescens dia pathogen nosocomial, manankarena ary miendrika rodobe izay an'ny fianakaviana Enterobacteriaceae. Ka io no mampiavaka ny E coli sy Serratia marcescens. Ankoatr'izay, S. marcescens dia afaka mamokatra pigment miloko mena amin'ny hafanan'ny efitrano ary E. coli kosa tsy afaka.
Ity ambany ity ny infographic dia mampiseho antsipiriany bebe kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny E coli sy Serratia marcescens.
Famintinana - E Coli vs Serratia Marcescens
E. coli dia bakteria miendrika gram-negatif, izay bakteria coliform. Mipetraka ao amin'ny tsinay ny olona sy ny biby salama izany. S. marcescens dia karazan-bakteria miendrika gram-negatif, izay miseho voajanahary amin'ny tany sy rano. Izy io dia mamokatra pigment mena amin'ny hafanan'ny efitrano. Araka izany, mamintina ny tsy fitovian'ny E Coli sy ny serratia marcescens.
1. “E. Coli Infection: Antony, soritr'aretina, fisorohana, risika & maro hafa ”. Healthline, 2020, Misy eto .
2. "Serratia Marcescens - Areti-mifindra Sy Agents Antimicrobial". Antimicrobe.Org, 2020, Azo zahana eto .
1. “E. coli Bacteria ”Nataon'ny NIAID (CC BY 2.0) avy amin'i Flickr
2. “Serratia marcescens” Nosoratan'i: Benutzer: Brudersohn - Wikipedia Alemanina (CC BY-SA 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Hydrophobic sy Hydrophilic Amino Acids Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Klebsiella Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa Fahasamihafana eo amin'ny Mycoplasma sy Ureaplasma Fahasamihafana eo amin'ny bakteria sy antibiotika
Fahasamihafana eo amin'ny Cane Corso sy Boerboel
Fahasamihafana eo amin'ny fanehoan-kevitra elektrôlika sy cycloaddition
Fahasamihafana eo amin'ny Homozygous sy Hemizygous
Fahasamihafana eo amin'ny Apple iPad 3 (iPad vaovao) sy Samsung Galaxy Tablet 2 (10.1)
Fahasamihafana eo amin'ny Galaxy Tab S2 sy iPad Air 2